Automechanica Ngosi na Shanghai-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Automechanica Ngosi na Shanghai
Oge: 2020-08-27 Hits: 45
N'oge Dec.03-06th nke anyị sonyere Automechanica ngosi na Shanghai.
Automechanika Shanghai bu uzo ahia na ahia ahia. Ngwaahịa gụnyere:
Akụkụ na akụrụngwa: akụrụngwa ụgbọala, chassis, ahụ, ngwa elektrọnik na ngwa eletriki, wdg. Igwe na-arụ ọrụ n'ime na mpụta, ike ịkwọ ụgbọala na sistemụ njikwa yana akụrụngwa.
Ngwa na ngbanwe, akụkụ akpaaka, akụrụngwa pụrụ iche, ọrụ mgbanwe, sistemụ arụmọrụ yana imewe ka mma.
Mmezi na mmezi: ụgbọ ala mmezi na mmezi akụrụngwa, ogbako idozi na eserese, mmezi ọdụ mwube na management.
Stationlọ gas na nhicha ụgbọ ala gas, ihicha ụgbọ ala na ndozi.
Shanghai Auto Parts Fair bụ Asia kasị ukwuu akụkụ akpaaka, mmezi nnyocha na diagnostic akụrụngwa na akpaaka onunu ngosi. Akụkụ nke ihe ngosi na-ekpuchi usoro ụlọ ọrụ ụgbọ ala dum, na-achịkọta ụdị ụwa niile na ụlọ ọrụ ụlọ na nke ndị mba ọzọ. Uwa nke abuo nke kachasi elu nke uwa karia Frankfurt Mother Show na Germany.
N'ihi mmepe ngwa ngwa nke n'ichepụta ụgbọala, akụkụ ụgbọ ala na ahịa mgbe a na-ere ya, yana oke ịrị elu nke ire ere n'ịntanetị, ngwa ọrụ ụgbọ ala na ọgba tum tum abụrụla otu n'ime ngalaba kachasị na ọkwa Alibaba.
N'ebe ngosi a, anyị gosipụtara ụdị ngwaahịa ọhụrụ dị iche iche, dịka ihe eji edozi, valvụ valvụ na ihe ndị ọzọ. Anyị natara mmata ndị ahịa na nzaghachi na ihe ngosi ahụ, nke mere ka anyị nwekwuo obi ike na ụlọ ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa a.
Previous: Mmetụta nke 5 ụzọ idozi taya
Ọzọ: Ihe amara nke oge oyi